गरीबीको कारण हाम्रो व्यवहार « LiveMandu
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०८:५५
जनताको व्यवहारले राष्ट्र र जनतालाई कसरी गरीब बनाउँछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न केही मुलुकको स्थितिलाई प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा हेरौं।
कट्टरपन्थी धार्मिक सङ्गठन (तालिबानीहरूको समूह) र उदारवादीहरू बीच राम्रो मेलमिलाप हुन नसकेर अफगानिस्तान बरबाद भइरहेको छ। अफगानिस्तानमा गरीबी बढ्दो क्रममा छ। जीवन असुरक्षित छ। अफगानहरू भय र त्रासको वातावरणमा बाँच्न अभिशप्त छन्। यदि अफगानिस्तानमा यी विभिन्न जातीय वा शक्ति–समूहबीच राम्रो मेलमिलाप हुने हो भने यो मुलुक गरीबीको दुष्चक्रबाट छिट्टै बाहिर आउन सक्छ। साधन र स्रोतको कमी यो मुलुकमा छैन। अफगानीस्तानको ‘बामियान’ पर्यटनको लागि विश्वमा नै प्रसिद्ध छ। तर अफसोच! बामियानका विश्वप्रसिद्ध मूर्तिहरू नष्ट पार्न तालिबानीहरूले धेरैपटक बमले प्रहार गरिसकेका छन्। गरीबीबाट मुक्त पार्न सक्ने पर्यटनका पूर्वाधार समाप्त पारेर देशमा कसरी समृद्धि ल्याउन सकिन्छ? तालिबानीहरूले किन यो कुरा नबुझेका होलान्? बुझून पनि कसरी? धर्मान्धताले उनीहरूको आँखामा पट्टी बाँधिदिएको छ। धर्मान्धता अफगानिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता र गरीबीको समेत प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। उदार विचारका अफगानीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा बस्न अहिले सहज छैन।
हामी आफ्नो गरीबीको लागि स्वयं जिम्मेवार छौं।